Draw Cartoons2PRO 2.13 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.13 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား အနုပညာ & ဒီဇိုင္း Draw Cartoons2PRO
Draw Cartoons2PRO ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းပြောပြ tool ကိုနှင့်သင့်အိတ်ကပ်ထဲမှာတစ်ခုကာတွန်း app ကို။ သငျသညျကာတွန်းဆွဲခြင်းနှင့်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူချင်ပေမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် tools တွေကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမအချိန်ရှိပါကပင်လေးတွေကအသုံးပြုခံရဖို့လုံလောကျရိုးရှင်းသောဤကာတွန်းဖန်တီးသူစမ်းပါ။
ကာတွန်းများကိုခပ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကာတွန်းအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျချောမွေ့ရွေ့လျားမှုအရတိုင်းဘောင်ဆွဲရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်သာကီးဖရိန်ဆွဲခြင်းနှင့်အလယ်အလတ် frames များကိုအလိုအလျှောက်တည်ဆောက်ထားကြသည်။ ဇာတ်ကောင်ရန်သင့်မိတ်ဆွေမျက်နှာများ assign, အသံတွေကို add, Youtube သို့မဟုတ် Facebook ပေါ်မှာရုပ်ရှင် upload နှင့်ကာတွန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်တစ်ဦးဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းတွေကိုအဖြစ်ကျော်ကြားမှုမှီ!
* အရိုးကာတွန်း - ဇာတ်ကောင်အရုပ်နဲ့တူပြောင်းရွှေ့နေကြသည်
* ကျွန်တော် frame ကိုချောချောမွေ့မွေ့လာမယ့်တဦးတည်းမှပြောင်းလဲ
* များပြားလှသော built-in မော်ဒယ်များ
ဗီဒီယိုနှင့်ခွဲဝေမှုအဖြစ် * တင်ပို့ animations တွေကို
* ပစ္စည်းများအယ်ဒီတာ - ပုံဆွဲ tools တွေကိုသုံးပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်စရိုက်လက္ခဏာအောင်သို့မဟုတ်တည်ဆဲရေးဆွဲတင်သွင်းများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်။ တစ်ဦးဇာတ်ကောင်ရေးဆွဲရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ရုံအရိုးစုအောင်နှင့်၎င်း၏အရိုး၏အသီးအသီးကိုပဲရေးတတ်တယ်။
လျှောက်လွှာသုံးစွဲဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်း stickmans နှင့်ကျော်ကြားသောလူမျိုးသည်အကြောင်းကိုရုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပြချမှတ်သူများ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Draw Cartoons2PRO အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Draw Cartoons2PRO အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Draw Cartoons2PRO အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Draw Cartoons2PRO အား အခ်က္ျပပါ
neonzippyboi စတိုး 1 308
Draw Cartoons2PRO ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Draw Cartoons2PRO အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.13
ထုတ်လုပ်သူ Zalivka Mobile
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://docs.google.com/document/d/1mbVsod0gwqWF3v12EFeR3UQ00ZihuMCBiQ3uSa1mNdk/edit#heading=h.1cvvkcc3hih5
လက်မှတ် SHA1: C3:71:40:20:64:C0:8C:73:86:BF:23:FD:2C:1F:3A:B4:D8:C4:03:A1
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jeck Landin
Draw Cartoons2PRO APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ